EMUI 10: tafaporitsaka ny sary voalohany an'ny kapaoty Huawei | Androidsis
EMUI 10: Sarin'ireo sosona voalohany tafaporitsaka
Ora vitsy lasa izay ny lisitry ny Telefaona Huawei izay hanavao ny Android Q, araka ny efa nolazainay taminao. Fivoahana izay miaraka amin'ny sary voalohany an'ny EMUI 10. Ny kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana ny marika shinoa, izay hiorina amin'ny Android Q. Ny sary voalohany izay mampiseho amintsika ny volavola izay hananan'ny kinova vaovao amin'ilay sosona.
Ny kinova 9.1 dia aparitaka amin'izao fotoana izao, na izany aza Huawei dia efa mieritreritra momba ny EMUI 10. Ity dia zavatra iray izay miverina mamorona tsaho momba ny mety hahavitan'ny marika sinoa farany ny findainy amin'ny Android Q. Inona ny vaovao avelan'izy ireo amintsika amin'ity raharaha ity?
Amin'ity kinova vaovao ity dia tsy misy fiovana lehibe amin'ny famolavolana. EMUI 10 miloka amin'ny tsipika mitohy amin'ny lafiny famolavolana, tsy misy fahasamihafana be loatra amin'ny kinova ankehitriny. Ho fanampin'izay, toy ny efa hita ao amin'ny kinova ankehitriny, dia hitantsika fa misy maody maizina misy azy.
Ka vitsy ny vaovao amin'ity tranga ity. Volavola iray hitazonana ny marika sinoa ireo singa lehibe indrindra, izay mampandeha tsara ny lambany ary manana ny fanohanan'ny mpampiasa. Mahomby izy ireo amin'ity lafiny ity, satria ny lambany dia misongadina amin'ny safidy maro sy ny fampiasana azy io.
Ny fanontaniana dia hoe ho tonga ve ny EMUI 10 na tsia. Ity sosona ity dia hiorina amin'ny Android Q, saingy rehefa mijoro ny zava-misy, ny marika sinoa dia hampiasa ny rafitra fiasany manokana izay mampanantena fa ho haingana kokoa noho ny Android. Antenaina fa ho tonga amin'ny faramparan'ity taona ity, miaraka amin'ny anarana toa ny HongMeng OS sy ARK OS araka izay azo atao safidy.
Manantena izahay fa hahafantatra bebe kokoa momba ireo fivoahana ireo. ary raha farany Huawei dia hanohy hampiasa Android na tsia. Raha izany dia afaka manantena isika fa afaka volana vitsivitsy dia ho lasa ofisialy ny EMUI 10, araka ny hitantsika tamin'ireto fivoahana voalohany ireto. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy ny fanamafisana dia raisinay ho tsaho izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » EMUI 10: Sarin'ireo sosona voalohany tafaporitsaka
Ity LG Q60 ity dia tara tara be any amin'ny faritra afovoany [ANALYSIS]
Nijanona tamin'ny fandefasana ny beta MIUI manerantany i Xiaomi amin'ity volana Jolay ity